हेटौंडा अस्पतालका मेसु सापकोटाले भने-उपचार सेवामा व्यापक सुधार भएकाे छ, तर कसैले बुझ्न सकेनन् – Health Post Nepal
हेटौंडा अस्पतालका मेसु सापकोटाले भने-उपचार सेवामा व्यापक सुधार भएकाे छ, तर कसैले बुझ्न सकेनन्
२०७९ असार ८ गते १०:१७
हेटौंडा- हेटौंडा अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट डा.रामचन्द्र सापकोटाले अस्पतालको उपचार सेवामा व्यापक सुधारका काम भए पनि कसैले बुझ्न नसकेको गुनासो गरेका छन्। ५० बेडको अस्पतालमा धेरै सेवा सुविधा र बिरामीको उपचारमा सुधार गरे पनि सर्वसाधारणबाटै बुझ्ने काम नभएको उनले बताएका हुन्। हेटौंडा अस्पतालमा विगत दिनदेखि बिरामीको चाप बढेर व्यवस्थापन अस्तव्यस्त बनिरहेको विषयमा सर्वसाधारणले अस्पताल प्रशासनमाथि प्रश्न उठाउँदै आएका छन्।
मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दैै मेसु डा. सापकोटाले विगतमा भन्दा अस्पतालमा धेरै सुधारका काम भएको बताउँदै केही साना कमजोरीलाई ठूलो मुद्दा बनाइएको बताए । सोमबार सर्वसाधारणहरुले अस्पताल परिसरमा धर्ना कसेर चिकित्सकहरुमाथि गलत व्यवहार भएको भन्दै प्रशासनले भर्त्सनासमेत गरेको छ। अस्पताल व्यवस्थापन समितिका सदस्य उत्सव चौलागाईंले चिकित्सकहरु अस्पताल समय छोडेर कतै मेडिकलमा नगएको दाबी गरेका छन्।
धर्नामा बस्नेहरुले चिकित्सकहरुलाई अस्पताल समयमा मेडिकल गएको आरोप लगाएको भन्दै कोही चिकित्सक मेडिकल गएको प्रमाण ल्याए कारबाही गर्ने चेतावनी उनले दिए। अस्पतालको व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण बिरामीहरुले उपचारमा कठिनाई भोग्दै आएको भन्दै सोमबार सर्वसाधारणहरुले अस्पतालअगाडि धर्ना दिएका थिए। उपचारका लागि आएका बिरामीले धेरै दुःख पाउने गरेको, गर्मीमा बिरामीहरु तातो जस्तामुनि घण्टौं लाइन बसेर ओपीडीको टिकट काट्नेदेखि औषधि लिनुपर्ने बाध्यता रहेको, बिरामीहरुले भिडियो एक्स-रे गर्न नपाएकोलगायतका गुनासो राखेका थिए।
धर्नामा सहभागीहरुले चिकित्सकहरुलाई पहिलो र अन्तिम सुझाव भएको भन्दै कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिएका थिए।अस्पताल व्यवस्थापन पक्षले कमिकमजोरी भएको खण्डमा सुधार्ने र सेवालाई चासो दिँदै बिरामीलाई सुविधाका साथ सेवा गर्ने प्रतिवद्धता मेसु डा. सापकोटाले जनाए। उनले कर्मचारी अभाव र आवश्यक प्रविधि नभएकाले अस्पतालमा उपचार गराउन समस्या भएको बताएका छन्। ५० वेडको स्वीकृति प्राप्त अस्पतालमा १ सय १० बेडको सेवा प्रदान गरिरहेको उनको दावी छ । उनले अस्पतालमा गुणस्तरीय सेवा बढाएकाले बिरामीको चाप बढेकोतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरे।
हाल मकवानपुरबासीले हाल २५ जना डाक्टरहरुबाट सेवा लिइरहेको उनको भनाइ छ।